प्रकाश दाहालको के कारणले निधन भएको हो ? « Deshko News
प्रकाश दाहालको के कारणले निधन भएको हो ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पुत्र प्रकाश दाहालको आकस्मिक हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
बिहान ५ बजेर ५० मिनेट अचेतावस्थामा दुई सुरक्षाकर्मीले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल ल्याउँदा नै उहाँको मृत्यु भएको अस्पतालका मृटुरोग विशेषज्ञ डा केपी अग्रवालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल ल्याउँदा नै उहाँका हातखुट्टा चिसो भइसकेको थियो, आकस्मिक कक्षमा ल्याइएको नौ मिनेटमै हामीले उहाँको निधन भइसकेको जानकारी परिवारलाई गराएका थियौँ ।”
“अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याउँदा उहाँ पूर्णतया बेहोश, हातखुट्टा पूरै नीलो र कडा, श्वासप्रश्वास पूर्णतया बन्द, शरीर पूरै चिसो, इसिजी गर्दा मुटुले गतिविधि नगरेको हँुदा बिहान ५ बजेर ५९ मिनेटमा मृत घोषणा गरिएको थियो”, डा जैसवालले भन्नुभयो ।
उहाँको उपचारमा डा जैसवाल, डा यादव भट्टसहित, डा रवीन्द्रप्रसाद यादव, डा विमलेश श्रेष्ठ र डा महेश यादवलगायत संलग्न हुुनुहुन्थ्यो ।
शरीर चिसो र सुन्निएको पाइएकाले अस्पताल ल्याइपु¥याउनु तीन घण्टाअघि नै उहाँको मृत्यु भएको हुनसक्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
पुत्रको निधन खबर पाएपछि चुनावी अभियानमा झापामा रहनुभएका अध्यक्ष दाहाल हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँ आउनुभएको थियो ।
छोराको मृत्युपछि शोकमा डुब्नुभएकी प्रकाशकी आमा सीता दाहालको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि नर्भिकबाट डा यादव भट्टको टोली दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेको छ ।
श्रीमान्को मृत्युको खबर सुनेर छोरासहित अस्पताल पुग्नुभएकी प्रकाशकी पत्नी सिर्जना त्रिपाठी अचेत भएपछि उहाँको पनि नर्भिककै आकस्मिक कक्षमा स्लाइन दिई उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
शनिबार बेलुकी सामान्य बिरामी भएपछि जाउलो खाएर सुतेका प्रकाश चुनावी अभियानका क्रममा चितवनबाट शनिबार काठमाडौँ आउनुभएको बताइएको छ ।
डा जैसवालले भन्नुभयो, “उहाँलाई आकस्मिक हृदयाघात भएको हो, किनकि उहाँको शरीर हेर्दा राम्रो छ, केही सेवन गरेको देखिएन, धेरैजसो युवामा आकस्मिक हृदयाघात देखिन्छ, वंशाणुगत पनि हुन्छ, ९९ प्रतिशत यही कारण मृत्यु भएको हुनसक्छ ।”
अन्य एक प्रतिशतमा मस्तिष्काघातको काराण हुन सक्ने स्ट्रोक हुनसक्ने चिकित्सकले बताएका छन् । आकस्मिक हृदयाघातका कारण हिँड्दाहिँड्दै छाती दुख्ने र तुरुन्त ज्यान जान सक्ने डा जैसवालले बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका सबै उच्च नेताले पेरिस डाँडामा पुगेर दाहालप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रकाशप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न काँग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेता तथा मन्त्री जनार्दन शर्मा, मन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत सबै नेता पेरिसडाँडा पुग्नुभएको थियो ।
सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि पनि बिहानदेखि दाहालको अवस्था बुझ्न पुगेका थिए । झापामा रहनुभएका अध्यक्ष दाहाल बिहान हेलिकप्टरबाट काठमाडाँै आउनुभएको थियो ।
उहाँ भावुक हुँदै करिब १२ः३० बजे छोरा निधन भएको अस्पताल नर्भिक पुग्नुभएको थियो । नेता दाहाल पुगेपछि मात्र अस्पतालले औपचारिक रुपमा निधन भएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको थियो ।